Madheshvani : The voice of Madhesh - प्रदेश २ को सरकार जनादेशविपरित काम गरिरहेको छ, हामी चुप लागेर बस्दैनौं : प्रभु साह (अन्तर्वार्ता)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी प्रदेश २ कमिटी अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य
० नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले प्रदेश २ को सरकारप्रति सन्तुष्ट छैन । नेकपाका शीर्ष नेताहरूले प्रदेश सरकारको आलोचना गरिरहेका हुन्छन् किन ?
— प्रदेश २ मा हामी एक नम्बर पार्टी हौं । तैपनि प्रदेश २ मा मधेशी दलले नै सरकार चलाओस् भन्ने धारणा राखेर हामीले समर्थन दिएका पनि हौं । मधेशी जनताको जनादेश पनि हामीले एक ढंगले मधेशी दललाई मान्यौं । प्रदेश २ को सरकार उनीहरूलाई नै चलाउन दिनुपर्छ र उनीहरूले कसरी चलाउँछन् हेर्न पनि जरूरी छ । विगतको आन्दोलन, अहिलेको माहोल र मधेशी दलको भूमिका हेर्दा उनीहरूले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर दिएकै हो । उनीहरूको गतिविधि जसरी अगाडि बढिरहेको छ, त्यसले हामी सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन । हामी उनीहरूको गतिविधिको समीक्षा गर्दैछौं । खासगरी मधेशी जनताको जुन अपेक्षा थियो त्यसरी प्रदेश सरकार अगाडि बढिरहेको छैन । हिजो उक प्रकारको भ्रम थियो कि मधेशको सम्मान, अधिकारका लागि मधेशी दलकै सरकार चाहिन्छ र अहिले त्यो भ्रम क्रमशः हट्दै गइरहेको छ । यो भ्रम मधेशी जनताबाट मात्र नभई मधेशी दलकै नेताहरूबाट पनि हट्दै गइरहेको छ । मधेशी दलमा जो सच्चा मनका साथ लागेका थिए। उनीहरू मधेशी दल छोड्ने क्रम सुरू भएको छ । अहिले मधेशवादी दलविहीन मधेश बन्दै गइरहेको अवस्था छ । त्यो अर्थमा हाम्रो पार्टीले यसरी भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्ने, सत्ताका रस चाट्ने र पूरै अराजकता सिर्जना गर्ने जुन क्रियाकलापहरू भइरहेको छ त्यसबारे हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ र एउटा धारणा बनाएर जानुपर्छ भन्ने चरणमा छौं ।
० भनेपछि प्रदेश २ मा पनि नेकपाकै सरकार बन्ने तयारी भइरहेको छ ?
— अहिले जनताको जनादेश त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई नै छ । किनभने जनताले हामीलाई ठूलो पार्टी बनाएको हो । तर, स्पष्ट बहुमत नभइसकेको र विगतका आन्दोलनहरूका कारणले पनि हामीले मधेशी दलहरूलाई नै समर्थन गरेका थियौं । अहिले मधेशी दलहरूको गतिविधि न सम्मान बढाउने खालको छ, न विकास र समृद्धि ल्याउने खालको छ । झन् मधेशलाई बदनाम गर्ने, मधेशलाई उजाड बनाउने, मधेशलाई तहसनहस पार्ने र त्यसले देशलाई असर पार्ने खालका जुन क्रियाकलापहरू भइरहेको छ त्यसले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ । हामीले अहिले पनि उजीहरूले सुधार गरोस्, राम्रो ढंगले जाओस् भन्नका लागि पार्टीका नेताहरूले सचेत गराउनु भएको हो । अहिले नै प्रदेश २ मा नेकपाको सरकार बनाउने ढाँचामा पुगिसकेका छैनौं । तर, चुपचाप रहेर बस्ने स्थिति पनि छैन ।
० मधेशी दलहरूको सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याएन भने नेकपाले सरकार बनाउने तयारी सुरू गर्छ ?
— हामी अहिले आशावादी नै छौं । किनभने मधेशमा विगतदेखि नै विभेदमा थियो, पछाडि पारिएको थियो, तर मधेश यो देशको प्रमुख अंग थियो । अहिले मानव विकास सूचकांकमा सबभन्दा पछाडि परेको छ । यसको समीक्षा गरेर उठाउने गरी सोच्नुपर्छ । हामीले मधेशी जनतालाई समृद्धि दिने सोचमा छौं । तर, बीचमा जसरी कम्युनिष्ट पार्टी भनेको पहाडियाको पार्टी, मधेश विरोधी पार्टी भनेर गलत भ्रमहरू छरियो त्यसलाई जनताले पत्याएनन् र हामीलाई पहिलो पार्टी बनायो । तैपनि केही तप्काहरू भ्रममा परेको हामीलाई लाग्यो, त्यो भ्रम नहट्दासम्म मधेश अधिकार सम्पन्न हुँदैन । किनकि सच्चा शक्तिहरूसँग टाढा भएर जनतो कहिल्यै पनि विजय प्राप्त गर्दैन । गलत बाटो समातेका साथीहरू त्यसबाट क्रमशः मुक्त भइरहेका छन् । त्यो अभियान अझ तीव्र रूपमा चल्नुपर्छ । किनकि मधेशी दल भनेको सत्ताको रस चाट्ने र भ्रष्ट तप्काको भन्ने देखाएको छ । आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि विभिन्न भ्रमहरू छरेर सत्तामा जाने दाउ मात्र देखिन्छ । जसरी सबै प्रदेशहरूमा सरकारहरू गठन भयो । अन्य प्रदेशहरूमा ५÷६ जनाको क्याबिनेट बन्यो तर जो सबभन्दा गरीब प्रदेश प्रदेश छ, पछाडि परिएको प्रदेश छ, त्यहाँ १३÷१४ जनाको क्याबिनेट बन्यो । यसले मधेशी सम्मानित भइरहेका छन् त ? प्रदेश सरकारले उत्पादनका थोक कार्यहरूमा जोड दिनुपर्ने थियो तर खुद्रा कार्यहरू गर्ने, चाट्ने काममा, भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्ने प्रवृत्तिहरू देखिएको छ । सदाचार र सुशासनको बाटोमा हिंड्नुको साटो अनियमितता र अराजकता बढाउने कार्य भइरहेको छ । उहाँहरूको कुनै पनि कार्यक्रम प्रभावकारी छैन, प्रदेश सरकारै छैन जस्तो लाग्छ । लुट्ने, खाने, बदनाम गराउने त्यसका लागि मात्रै सरकार देखिएको छ । भनेपछि यसले मधेशी जनताको गौरवलाई बढाएन, उत्साहित बनाउन सकेन र एक किसिमको खिन्नता र आक्रोश मात्र पैदा गर्ने क्रियाकलापहरू भइरहेको छ । त्यो स्थितिलाई हामी टुलुटुलु हेर्न मिल्दैन । हामीले एउटा उपयुक्त कदम चाल्नुपर्छ लागेको छ ।
० त्यो उपयुक्त स्टेप भनेको नेकपाको सरकार बनाउनु हो ?
— पहिला त हामीले विषयवस्तुको सही संश्लेषण गर्नुप¥यो । समीक्षासहित एउटा निचोड निकाल्नुप¥यो । जो हामी सापेक्षिक रूपमा भनिरहेका छौं कि यो सरकारले सही दिशा समातेको छैन, सही काम गरिरहेको छैन । मधेशका जनताको जुन माग हो त्यसको उल्टो हिंडिरहेको छ । जनताको जनादेशविपरीत काम गरिरहेको छ, त्यसलाई सुधार्नुपर्छ । पहिलो चरणमा हामीले उहाँहरूलाई सुझाव दिने, दबाब दिने काम नै उचित हुनेछ । त्यसरी पनि सुध्रिने स्थिति भएन भने जसरी हामी जनादेश आएको छ त्यो अनुसार स्टेप हामीले चाल्नुपर्छ ।
० प्रदेश २ मा नेकपा ठूलो दल भएपनि सरकार बनाउने बहुमत छैन । कुन दलसँग नेकपाको सहकार्य हुनसक्छ ?
— प्रदेश २ मा दुईटा मधेशी दलको सम्मिलित सरकार छ । त्यसमा राम्रा र खराब दुवै किसिमका मान्छेहरू छन् । मधेशवादी दलमै सबै भ्रष्ट त होइनन् । सबैले यसरी बाँडीचुँडी खाउँ भन्ने त छैन । त्यसमा केही सीमित मानिसहरूले त्यसको दिशा बिगाडिरहेका छन् । मधेशलाई बदनाम गर्ने सबै मधेशी दलमा त लागेका थिएनन् । मधेशलाई सम्मान दिलाउने, विकास गर्ने भन्ने आशयका साथ पनि मान्छेहरू लागेका छन् । सबै जितेका सांसदहरू भ्रष्ट भइसकेका छैनन् । त्यसभित्र पनि यसको विरूद्ध लड्ने मान्छेहरू छन् । त्यसमध्येका राम्रा मान्छेहरूको एउटा समूह बनाउन सकिन्छ । मधेशी दलहरूमा रहेका राम्रा व्यक्तिहरूको सपोर्ट लिएर अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति स्पष्ट देखिरहेका छौं । अन्य पाटीहरू पनि प्रदेश सरकारको समीक्षाको चरणमा छन् । मधेशमा भ्रष्टाचार होस्, मधेश बदनाम होस् भन्ने चाहने मान्छेहरू सबै त छैनन् । त्यसलाई सुधार्ने मान्छेहरू पनि छन् । भनेपछि त्यसरी सहकार्य हुन्छ र त्यसको शक्ति सन्तुलनको आधारमा अगाडि बढ्छौं ।
० जसरी तपाइँले प्रदेश २ सरकारमाथि आरोप लगाउनु हुन्छ, त्यसको तुलनामा अन्य प्रदेशहरूले राम्रा काम गरिरहेका छन् त ?
— मैले अरू प्रदेशहरूको तुल्नात्मक भन्ने हो । अहिले त भर्खर देशमा प्रदेश सरकारहरू काम गर्दैछ । त्यसैले, प्रदेश २ का लागि हामी हतारमा पनि छैनौं । तर, अन्य प्रदेशसँग तुलना गर्ने हो भने प्रदेश २ नै बढी भ्रष्ट, कुशासन भएको देखिन्छ । प्रदेशले गर्ने काममध्ये एउटा पनि काम जनताले महसुस गरेका छैनन् । सरकारले उत्पादनलाई जोड दिने कि प्रचारलाई जोड दिने ? ठोस र देखिने काम गर्ने कि छर्ने काम गर्ने ? कुनै प्राथमिकता देखिदैँन उनीहरूको । मानव सूचकांक विकासमा परेको समाजलाई उठाउने प्रदेश सरकारको प्राथमिकता के हो ? भनेपछि केही प्राथमिकता देखिँदैन । प्राथमिकता यति हो कि आफ्नो कार्यकर्तामा बाँडीचुँडी खाने । तर, अन्य प्रदेशहरूले त त्यस्तो गरिरहेको छैन । हरेक प्रदेशका मन्त्रालयहरूले देखिने कामहरू गरिरहेका छन् । त्यसैले हामीले अहिले चिन्ता लिएको प्रदेश २ नै हो । अन्य प्रदेश त सुल्टो बाटोमा हिंडिरहेका छन्, तर प्रदेश २ त उल्टो बाटोमा हिंडिरहेको छ ।
० तर, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले त संघीय सरकारले नै प्रदेश सरकारलाई असफल बनाउने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ नि ?
— बाहिरी मान्छेले के भन्छ त्यो मुख्य कुरा होइन, तपाइँले के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो मुख्य कुरा हो । अन्य पार्टीहरूले त आरोप लगाउँछ, तर आफ्नै पार्टीका नेताहरू के भन्छन् ? जसले मतदान गरेर जिताएका छन् उनीहरूले के भन्छन् ? आफैमा कुटाकुटा गर्ने अनि आरोप अरूमाथि लगाउने ? यसरी मधेशीले अधिकार पाउँछ, मधेशी सम्मानित हुन्छ ? जनताले त उहाँहरूसँग सोधिरहेका छन् । बजेट कम छ भनेर भन्छन् तर, जति छन् त्यति पनि कहाँ गर्न सकेको छ । कम भनेर आफैमा बाँडीचुँडी खाइदिने, बढी आयो भने काम गर्ने ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । अहिले पनि धेरै बिग्रिसकेको छैन । उनीहरूमा सद्बुद्धि आओस् । तर, मलाई विश्वास छैन कि जो आफै लुट्नका लागि बनेको हो उसले केही गर्छ । तर, जो सच्चा मधेशका लागि लड्ने शक्तिहरू छन् उनीहरू कुदेर आउन जरूरी छ । अनि मात्र मधेश अगाडि बढ्छ ।